Umxholo omtsha wento entsha iMac Mini, nguLouis Berger | Ndisuka mac
Umxholo omtsha wento entsha iMac Mini, nguLouis Berger
Uhlaziyo olucwangcisiweyo lweemveliso zeApple luphezulu oluphindaphindwayo rhoqo ngonyaka / kabini ngonyaka / ngonyaka kuxhomekeke kwisixhobo ekuthethwa ngaso. Nangona kunjalo IMac Mini ihlala ikhethwe yodwa kulo msinga oqhubekayo wohlaziyo, Ukuhlala ixesha elide kwintengiso kunabanye oogxa babo.
Ngenye imini, kudliwanondlebe uTim Cook wanika abafundi MacRumors, Umphathi omkhulu wenkampani yaseCalifornia uqinisekisile ukuba uApple unengcebiso kwaye uyaqhubeka nokuyisebenzisa kwakhona imveliso eyaziwa ngokuba yiMac Mini, kwaye kusekude ukugqitywa.
Ngoko ke, ULouis Berger, Umyili waseJamani kunye nomyili wenkampani ebizwa ngegama lakhe, Uyile umxholo omtsha weMac Mini ngohlobo lweTouch Bar, oguqula ngokupheleleyo Ibhokisi yesikwere yendabuko ngoku enemiphetho ejikeleze ngononophelo apho sidibanisa khona izinto ezahlukeneyo eziyimfuneko ekusebenziseni imveliso yeApple.
Ngokwasemzimbeni, I-Apple inetekhnoloji eyimfuneko yokubandakanya onke amacandelo ayicebisayo Berger kwindawo encinci enjalo. Sibona iifoto ezithunyelweyo zoyilo olungezantsi:
Umxholo weMac Mini, nguLouis Berger, ngasemva koyilo.
Ngale ndlela, singafumana iPC eya kuthi emva koko isebenze njengeTouch Bar, ixelise leyo ngoku ibandakanyiwe kwiMacBook Pro entsha. Ukuyila BergerIngabandakanya amazibuko amane e-USB-C, izibuko le-HDMI elinokusetyenziselwa ukubeka esweni, izihlanganisi ezimbini ze-USB 4 kunye nomfundi wekhadi le-SD, kunye nekhamera ifakwe kuyilo lokusebenzisa i-ID yobuso.
Ngaphandle koyilo loyilo, intelekelelo entle kodwa ekude, Kuyinyani ukuba rhoqo, inkampani yaseMelika ithanda ukummangalisa amaxesha ngamaxesha kunye noyilo kunye neemveliso zayo. Olu luvo nje olulula, kodwa ngaphezulu kwesinye fan sophawu luyanyibilika xa ucinga imveliso yolu hlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » Umxholo omtsha wento entsha iMac Mini, nguLouis Berger
H URicardo Comeglio sitsho
Phendula H Ricardo Comeglio
I-Apple ayiyi kwamkela uhlaziyo kwizicelo eziyilelwe yi-watchOS 1 SDK ukuqala kunyaka olandelayo